I-2 JUNIPER Iikholeji zoQeqesho Wonke umntu kwi-Industries ufuna ukufunda IYO
I-2 JUNIPER Iikholeji zoQeqesho Wonke umntu kwi-Industries ufuna ukufunda
IJuniper yenza ukuqhubela phambili okunikezelayo ukunika imibutho amandla okubambisana, ukunyamekela imiba kunye nokubamba izivulo.
IJuniper idibanisa abantu ukuba badibanise iingcamango zabo kwiindawo ezijikelezayo kunye nokuphefumlela ubomi kwimibono yabo. Inkqubo yinkalo apho abantu abatsha kunye nabantu ngabanye badibana khona, kwaye zeziphi iziphumo ezinokumangalisa ngokwenene.
I-JUNIPER Iikhosi zoQeqesho Wonke umntu Kwimashishini Afuna ukufunda
I-JUNIPER Izifundo zoQeqesho kunye neZatifikethi zifana neLandela
Iinjongo uJUNIPER JNCIS -SEC
Iqela elijoliswe kuJUNIPER JNCIS -SEC
Izinto ezibalulekileyo kwiJunipher JNCIS -SEC
2. UJUNIPI JNCIA - UJUNOS
Injongo UJUNIPI JNCIA - UJUNOS
Iqela elijoliswe kuJUNIPER JNCIA - UJUNOS
Iimfuno zoJuniyeli JNCIA - UJUNOS
Njengombutho, injongo ephambili yeJuniper ukukhonkcoza yonke into kunye nokubandakanya wonke umntu. Njengomashishini, umJuniper uzama kwimibutho ebalulekileyo yefashini eyenza ukuqhuba imisebenzi yabo, ukuvuma ukuvuma, kunye nokudibanisa neqela eliphawulekayo ngeendlela ezinempembelelo yangempela ebomini babantu.
UJUNIPI JNCIA - UJUNOS
I-JNCIS-SEC okanye i-Juniper Networks Certified Certifiedist - Inkqubo yoKhuseleko ihlose ukunika amandla kumhlaba kwiinkqubo zokhuseleko, ukucwangciswa kwazo nokuphanda kwiimeko ezinkulu zezoshishino. Le khosi icwangciswe kwiinkqubo zokulawula iinkqubo kunye namava kunye nokufunda phakathi kwendlela yokufunda kweJunos yee-GadX Series zobuchwepheshe.
Ukubonisa ulawulo oluqhelekileyo kunye nenqabiseko kunye neepatheni ezikhoyo kwi-intanethi.
Nika umfanekiso wesigidi se-SRX Series kunye noyilo lwenkqubo.
Ukubonisa umgca weplani kunye nokudalwa kwiseseshoni eyenziwa yi-SRX Series zobuchwepheshe.
Ukubonisa, ukulungiselela, kunye neendawo zesikrini.
Ukubonisa, ukulungiselela, kunye neendlela zokuphepha kwesikrini.
Ukucwangcisa, ukulungiselela, kunye neskrini se-firewall ukuqinisekisa.
Ukubonisa iintlobo ezahlukeneyo zokuhlaselwa kweenkqubo.
Iindlela zokwakha kunye neZkrini ukulungiselela ukuhlela ukuhlaselwa.
Cacisa, yenza, kunye ne-NAT yesikrini, njengoko kuqhutywe kwiinqanaba zokuphepha zaseJunos.
Cacisa isizathu kunye nomatshini we-IP Security (IPsec) iinkqubo zangasese ezizimeleyo (i-VPNs).
Yenza kunye neprogram ejongene ne-IPsec VPNs esekelwe kunye nekhosi.
Sebenzisa kunye nokuphucula idilesi yesiginesha ye-IDP.
Hlela indlela kunye ne-IDP yeskrini kunye neefom zesicwangciso.
I-Portray, ulungiselele, kunye nekrini ukufikeleleka kwiindawo ezinobumba.
Innovative Technology Solutions inikeza ukuqeqeshwa kweJNCIS kwiindawo ze-9 ezahlukileyo eIndiya - e-Bangalore, e-Chennai, eDelhi, e-Gurgaon, e-Hyderabad, e-Kolkata, e-Mumbai, e-Noida nase-Pune.
Le khosi incedisa abalawuli beGridi Series zobuchwepheshe. Laba baphathi baquka iinkqubo zeenjineli, abaphathi, abasebenzi be-bolster kunye ne-faculty ye-bolster.
Iziganeko kufuneka zibe neenkcukacha zokulawula iinkqubo ezibalulekileyo kunye nokuqonda kwe-Open Systems Interconnection (OSI) kunye ne-TCP / IP. Iziganeko kufuneka zihambe ngokusesikweni kwiNkcazelo yeJoos Operating System (IJOS) kunye neJunos Routing Essentials (JRE), okanye unamava afanelekileyo ngaphambi kokuya kweli klasi.
Uqeqesho lweJNCIA - uJunos oluvela kwi-Innovative Technology Solution yi-certification level level ehamba malunga nokusekwa koqeqesho lweJunios. IJuniper Networks CertifiedAssociate ibonisa amandla ochwepheshe ukuba asebenze kunye noJunos OS, ukutshintshisana, ukulawula kunye neendlela ezibalulekileyo zokulawula iinkqubo. Fumana ithuba lokufumana malunga neenxalenye eziphambili zeprogram zeJunos ngokubonisa okubonakalayo kunye neesabhabhathi ziseshoni. Khetha i-aptitude ekucwangcisweni nasekulawuleni i-Junos OS kunye nemisebenzi yayo yegadget.
Ukwenza imisebenzi eyahlukileyo kwi-CLI yokucwangcisa kunye neendlela zokusebenza
Ukuhlaziya kwakhona ijejethi zeJunos kwizicwangciso zazo zokuvelisa izityalo
Ukuzisa nokongamela ukulungelelanisa izixhobo
Yenza izabelo zokungena kwesikhokelo, ukucwangcisa okwenyaniso, iSNMP kunye ne-NTP
Ukuhlaziya ukulungiselela amalungiselelo
Yilungiselele kwaye isebenze uni-cast RPF (i-Reverse Path Forwarding)
Inkqubo yokuhlaziya i-watchword kunye nokuxhaswa kwenkxaso yesiseko seJunios
Ukugqitywa kweJunos OS ngokufanelekileyo
Ukujongana nokulawula imisebenzi, ulawulo oluhambayo, i-OSPF kunye neendlela zokulawula
Ukuhlaziya imirhumo yomlilo
Izixhobo zeTeknoloji ze-Inventive zinika ukuqeqeshwa kweJNCIA kwiindawo eziyingqayizivele ze-9 e-India - e-Bangalore, e-Chennai, eDelhi, e-Gurgaon, e-Hyderabad, e-Kolkata, e-Mumbai, e-Noida nase-Pune.
Le ndlela yeJunos igqibelele kwiintsholongwane okanye iinkqubo zokulawula iinkqubo ezinqwenela ukukhulisa ingqiqo kwiJunos OS, iJuniper Networks ebalulekileyo kwaye iqondisa iingcamango.
Kwiintlobo ezintathu zeeJosos ngaphantsi, i-JNCIA-Junos iyona mfuneko ebalulekileyo kwiiThathu zeJunos Tracks:
Intlangano yeengcali Ukuhamba kunye nokutshintshela: Lo mzila wukusebenza kwabo basebenzise isiseko okanye bafike kumalungiselelo kwiJuniper Networks eqondisa kunye nokutshintsha imimiselo yokugqibela ukuya ekupheleni ngaphakathi kwintlalo yonxibelelwano yeendaba okanye indawo ye-Fortune 100.
Ukuqhuba ukuhamba kunye nokutshintshwa: Le mzila yilabo abasebenza kancinci ngeemeko zoshishino ezongezelelweyo ezizazisa nokuqinisa iiJuniper Networks iinkqubo ezisekelwe kwintshukumo apho i-LAN ne-WAN iyatshintsha kwaye iguqule ihleli.
Ukhuseleko lweJunos: Lo mzila ulungelelaniswa nabantu abachazelayo kwaye baqhube iinkqubo ezikhuselekileyo zeJuniper Networks.